Codee | Minnesota Vote by Mail
Waxaan kuugu hambalyeynayaa inaad hal talaabo u dhawdahay codbixinta 2020.
Waad ku mahadsan tahay inaad tahay codeeya oo aad hubiso in codkaaga la maqlo sanadkan!
Waa maxay codku boosta?
Ku codbixinta boostada waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka codbixiso warqaddaada amniga gurigaaga, ilaa iyo inta aad ku dalbatey warqadda codbixinta waqtigeeda.
Ma u baahanahay inaan bixiyo sabab aan ku codsado warqadda cod-bixinta?
Maya, dhamaan cod bixiyeyaasha Minnesota waxay dalban karaan warqadda cod-bixinta ee sabab kasta ha noqotee.
Waa maxay sababta aan u codsanayo warqadda cod-bixinta?
Waxyaabo badan oo shaki la’aan ah ayaa ku jira nolosha dadka hada, waxaanan dooneynaa inaan hubino in tirintaada cod bixinta xitaa haddii aadan tagi karin goobta codbixinta maalinta doorashada. Sida gacmo dhaqitaankta oo kale, codsashada warqadda cod-bixinta ee boosta ayaa ah nooc ka hortag ah si loo hubiyo inaad ku gudan karto waajibaadkaaga inta aad naftaada iyo tan bulshadaagaba dhawrto.
Maxaa dhacaya haddii aan go’aansado inaan doonayo inaan codeeyo maalinta doorashada?
Ilaa iyo intaadanwarqadda cod-bixinta ku ridin boosta, wali waad beddeli kartaa fikirkaaga oo aad codkaaga ka dhiiban kartaa codbixinta.
Maxaan u baahan nahay inaan sameeyo si aan u hubiyo inaan codkeyga la tiriyo?
Aqri tilmaamaha la socda warqaddaada si taxaddar leh.
Baqshadaada saxeexdu waxay lahaan kartaa sanduuq markhaati ah oo dhammaystira oo saxeexa. COVID19 dhartiis, ma jiro shuruud markhaati oo loogu talagalay codbixiyeyaasha markhati ee (Nofeembar 3, 2020) Gobolka Doorashadeed. Cod-bixiyeyaasha aan diiwaangashanayn ayaa wali u baahan doona marag, si ay u muujiyaan caddeyntooda degganaan.
U dir boostada codbixinta iyo foomamka isla marka aad dhamaysid. Waraaqdaada la soo celiyay waa in lagu dhajiyaa maalinta doorashada ama kahor maalinta doorashada (Noofeembar 11, 2020) oo ay degmadu heleyso maalinta ka horreysa, oo u soo dhici karto maalinta labaad ama seddexaad doorashada kadib.
Maxay tahay sababta aan u dalbanayno waraaqaha codbixinta bedelkii diiwaangelinta codbixiyeyaasha?
Codsiyada codbixintu waxay la yimaadaan foomamka diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha loogu talagalay kuwa aan weli isdiiwaangalin.
Maxaad ku samaynaysaa foomkayga codsi cod-bixinta ee boostada?
Waxaan u soo celin doonnaa foomkaaga codsiga Xoghayaha Gobolka ama xafiiska doorashada deegaankaaga 5 maalmood oo shaqo gudahood markaan helno.
Goorma ayaan helayaa warqadda-codbixinta?
Haddii aad codsatay warqadda cod-bixinta ka hor wakhtiga codaynta, waa laguu soo diri doonaa marka codbixintu bilaabato doorashadaas, 46 maalmood ka hor doorashada codbixinta lagu codsaday.
Sidee ayaan ula socon karaa codkayga?
Xafiiska Xoghayaha Gobolka Minnesota wuxuu hayaa waddo aad ku hubiso halka ay ku taallo codbixinta boosta. https://mnvotes.sos.state.mn.us/AbsenteeBallotStatus.aspx
Waxaan hayaa su’aalo dheeraad ah, xagee baan ka hagi karaa?
Waxaan jeclaan lahayn inaanu kaa maqalno hadaa su’aalo dheerad aa qabtid! Fadlan waxaad dareentaa inaad xor u tahay inaad wax u qorto info@mnvotebymail.org wixii su’aalo ah!